Oromo News 04.23.21 | KWIT
Oromo News 04.23.21
By Fatiya Adam • Apr 23, 2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni haarawa due 5 yoo tau kan haarawa qabame ammo 400 ol akka tae himan, Woodbury County keessati nama 18 haarawa qabame dabalate. Akka dhukubni jalqabe Iowa keessati sababa corona virus namni due 5,900 dha.
Manni fayyaa Siouxland maneen barumsa gurguddaa sadi keesssati talaali corona virus harbaa dhuftu akka jalqabu akka karoorfate hime..
Itti gaafatamtooni xalayyaan warraa ergan irrati akka umatti biraa hin tajaajille barsiisotaafi barattoota qofa akka tae himan.
Talaalin kunnis fidheedhani.
Lt. Governor Adam Gregg seati booda bakka cilinika talaali Siouxland Expo Center dhaqee ture. Dhalataan Hawarden xurataa kan bahe kokkobii NFL Dallas Clark waliin tae. Lachuu talaali corona virus Sioux City fudhatani jiran. Clark, dhalataa Iowa native kan tae Indianapolis Colts siif tabate. Lachuu namni akkak talaali corona virus fudhatuuf yaala jiru.
Ganama kana extension ISU fi baldhisuudhaf agency ummataa action waliin stadium Clark fi Lewis bakka makiina itti dhaabatuti qarqaarsa nyaata godhani jiru.
Box nyaata 1250 ta’an warra qotee bultootaf USDA’s dhaan keenameefi jira. Ogeessi tokko akka jedhetti namni baayen sababa Covid-19 uumame baaye akka hojattaa jiran hime.
sangaantadhaan nyaata qarqaarsa corona virus sagantaa food assistance kan godhameedha.
Qonnaan bultootaf gabaa Sioux city guyyaa harbaa ganama seati 8 a.m irraa hanga May 5th kara west Tyson bakka makiina dhaabanitti daldala banuu karoorfatni jiru. Gabaan kunis guyyaa sanbata October dhummaati banaadha.
Akkasumas, library Sioux City akka beeksisetti location downtown seaati seera isaa guyyaa wiyxata, May 3rd irraa kan jalqabu ta’a. Library meeshale itti fayyadaman jia dhuftu keesa akka itti dabalaa deeman abdii qaban. Maamiltooni akka addaan fageenya ufii eegatanif achi keessati seati tokkoof akka turuu danda’an himan. Haguugin fuulas kan barbaachisuudha.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasetti sababa Covid-19 namni haarawa 6 akka due fi namni 500 ol ammo haarawa akka qaban hime, Woodbury County seaati 24 keessati namni 17 haarawa qabame jira.
Guyyaa kaleesa Woodbury County keessati sababa Covid-19 namni yeroo jalqaba due wagga tokkofaa isaa akka tae himan. fuula facebook Siouxland District health irratti akka mullisutti yaadanno nama 221 sababa Covid-19 County keessati kan due yaadano godhan.